Fitaizana sy fanatanjahantena :: Manampy ny ankizy hianatra amin’ ny alalan’ny baolina kitra ny Talenta Akademia • AoRaha
Fitaizana sy fanatanjahantena Manampy ny ankizy hianatra amin’ ny alalan’ny baolina kitra ny Talenta Akademia
Manova ny zava-misy eo amin’ny fiarahamonina amin’ny ankapobeny ny sekoly fianarana baolina kitra, Talenta Akademia. Maro ireo ankizy variana any amin’ny taranja ka manao antsirambina ny fianarany.
Mifanohitra amin’izany kosa ny mikasika an’ireo mpilalao ao amin’ny Talenta Akademia ao Toamasina sy eny Arivonimamo. “Fitsipika ao amin’ny sekoly mihitsy ny hoe mijanona ny baolina rehefa ratsy ny vokatra any am-pianarana. Rariny raha mpianatra nahay indrindra tamin’ny BEPC 2018 ny mpianatra iray tato. Nisaotra anay ihany koa ireo ray aman-dreny noho ny filofosan’ireo zanany amin’ny fianarana”, hoy Rajaonesa Miora, isan’ny nanangana ny sekoly.
Mitaiza sy manabe ireo ankizy manomboka amin’ny 5 taona ka hatramin’ny sokajy “senior” ny Talenta Akademia sady manana klioba mifaninana amin’ny sokajy diviziona voalohany ihany koa. Efa manomana ny taom-pilalaovana manaraka any Toamasina izay hanomboka amin’ny 15 oktobra ho avy izao ry zareo.
“Manana tetikasa vaovao kosa izahay. Hitady mpiahy iray isaky ny mpilalao izay miisa valopolo amby zato, any Toamasina sy roapolo eo ho eo any Arivonimamo. Hatao izany mba hanana ho avy mamiratra ireo ankizy sy tanora amin’ny fianarany sy amin’ny baolina kitra”, araky ny fanazavan’itsy tompon’andraikitra itsy hatrany.
Fiainana atleta :: Hiato amin’ny atletisma Razanamalala Olga